In kabadan 70 ficilo qiimo sare ah oo loogu talagalay Adobe Photoshop at 91% off! | Abuurista khadka tooska ah
Waxqabadyadu waxay noqon karaan qodob muhiim ah oo naga caawinaya inaan baranno sida loo horumariyo tayo sare, saameyn ballaaran oo xirfadeed. Gaar ahaan markaan isku dayeyno inaan abuurno saameyn xirfadeed iyo mid isku dhafan, curiyaha noocan ah waa mid aad wax ku ool ah maxaa yeelay marka lagu daro inuu na tuso nidaamka, wuxuu sidoo kale na siin doonaa natiijooyin wax ku ool ah dhowr daqiiqo. Maxaad ii sheegi laheyd hadaan kula wadaago in ka badan 70 ficil ee saameynta ugu badan ee shabakada?
Halkan waxaan ku soo jeedineynaa xirmo ficilo kala duwan oo xirfadeed (waxay na siineysaa 100% natiijooyin xirfad leh) ee saameynta ugu badan ee ay jecel yihiin dhammaan sawir qaadayaasha Kaliya waa 16 doolar (14 euro)! Natiijada? Saamayn tayo sare leh halabuur kasta oo aad horumariso. Halkan guji si aad hadda uga iibsato 91% dhimis oo keydi $ 175.
Guud ahaan markaan tixraacno ilaha xirfadeed ee kaladuwan, waxaan aaminsanahay in qaab aan macquul aheyn uu qiimuhu aad u sareeyo, hase yeeshe taasi maahan inay sidaas ahaato. Tusaale fiican ayaa ah midka aan maanta kuu soo bandhigayo. Ahaanshaha dalab koobaya tiro badan oo saamayn iyo hagaajin ah, qiimaha aad baa loo dhimay sidoo kale waxay na siisaa noocyo kala duwan oo beddel ah. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu soo jiidashada badan ee aan heli karno markaan bilaabayno inaan horumarino xirmadayada xirfadeed ama maktabadda ayaa ah saameynta loo diyaariyey loona qaabeeyey in isla markiiba lagu dhaqmo. Waxa aan u naqaanno ficil ahaan. Sababta Marka hore maxaa yeelay ficiladu waa kheyraadka ugu dhaqaalaha badan taasi waxay ku jirtaa shabakada inkasta oo ay leedahay awoodo badan oo ka dhigaya mid ka mid ah kuwa ugu wax ku oolka badan. Marka labaad, sidoo kale maxaa yeelay waxay noo keenayaan maal laba jiho oo kala duwan. Dhinaca kale, waxay na siin doonaan farsamo iyo aqoon aan ku dhaqan galino dalabyada mashruuc heer-xirfadeed soo bandhigo iyo, dhinaca kale, waxay sidoo kale na siin doontaa waxyaabo maaddo ah oo aan heli karno waqti kasta iyo dalbo iyada oo aan dhibaato kale la arkin. Marar badan, kheyraadka noocan ahi wuxuu naga caawin doonaa inaan helno a cirbadeynta waxyiga iyo xitaa qaab dhismeed horudhac ah si aad u abuurto saamayn adiga kuu gaar ah oo gaar ah. Mararka kale, waxay macnaheedu noqon doonaan waqti badan oo la ilaaliyo oo sidaas awgeedna loo fududeeyo habsami u socodka wax soo saarkeenna, oo aan noqonno xirfadlayaal leh xoogaa xorriyad badan iyo helitaanka kheyraad.
Runtu waxay tahay inay tahay wax lala yaabo in la helo noocyada uruurinta iyo beddelka tan iyo markii, sidaad ogtahay dhowaanahan, dhammaan suuqyada ilaha sawirada ay noqonayaan kuwo aad u ballaaran. Natiijo ahaan, qiimaha ayaa si aad ah ugu sii kordhaya ardayda iyo xirfadleyda cusub ee laga yaabo inaysan haysan awood dhaqaale oo ku filan oo ay ku helaan ilaha aasaasiga ah iyo kuwa lagama maarmaanka u ah soo noqnoqoshada.
Haddii aan ku xisaabeyno qiimaha xirmadan kheyraadka si ujeedo leh iyo qaab shaqsiyeed, waxaan layaabi doonnaa inaan ogaano in wadarta qiimaha bangigan saameyntu ay noqoneyso 191 doolar (175 euro), sikastaba dalabkan waxaan kuheli karnaa iyaga oo leh boqolkiiba 91%. Xaqiiqdii, waa wax dabiici ah inay ku kacdo kharash noocan oo kale ah maadaama ay ku jirto qadar aad u tiro badan oo kheyraad ah sidoo kale waxay bixisaa natiijooyin aan caadi aheyn codsi kasta ka dib.
1 Xir xirmo
1.1 Waxqabadyada lagu gaarayo saameynta HDR:
1.2 Ficillada lagu gaarayo saamaynta Qoraalka:
1.3 Waxqabadyada lagu gaarayo saamaynta biyo-biyoodka:
1.4 Waxqabadyada lagu gaarayo saameyn xardhan:
2 Weli wax badan ayaa jira
Buugyarahan waxaad kuheli doontaa awood aad kuhesho saameyn iyo ficil aad caan u ah qaab sifiican loogusoocay oo amar ah. Iyaga ka mid ah:
Waxqabadyada lagu gaarayo saameynta HDR:
Waa mid ka mid ah saameynta ugu caansan maanta. Magaceedu wuxuu ka yimid Range Dynamic Range taas oo af-ingiriisi ahaan looga jeedo kala duwanaansho firfircoon. Saameyntani waa natiijada farsamooyin dhowr ah oo u oggolaanaya in la helo iftiin fiican oo u dhexeeya meelaha ugu fudud iyo meelaha ugu madow ee sawir la xiriira farsamooyinka sawir qaadista caadiga ah. Sawirro kaladuwan oo firfircoon ayaa na siiya sawirro si aad ah ula jaan qaada kuwa ay indhuhu arkaan, tan iyo markii aan u kuur galno waxaan awoodi karnaa inaanu kala saarno faahfaahinta mid kasta oo ka mid ah aagagga sawirka ka kooban (labadaba hoosku, sida muuqaalka guud ama dhexe ). Sidan oo kale, waxaan ku guuleysan doonnaa aaminaad aad u weyn iyo saxsanaanta daaweynta iftiinka ee qabashadayada, labadaba sawirada lagu dhajiyay qorraxda tooska ah ama xitaa kuwa soo bandhigaya heerar aad u jilicsan ama daciif ah oo iftiiminaya sida goobaha habeenkii. Waxaa jira siyaabo kala duwan oo loo helo bilicsanaantaan loona siiyo daaweynta HDR iskuxirkeenna. Dhexdooda waxaan kaheleynaa khalkhal galinta sawirka ama tafatirka dhijitaalka ah. Iyada oo loo marayo kooxdan waxqabad waxaad ku guuleysan doontaa natiijo wanaagsan oo had iyo jeer leh faa'iidooyin waaweyn:
Nidaamku ma qaadan doono wax ka badan saddex daqiiqo.
Uma baahnid inaad heer farsamo sare ku yeelato Adobe Photoshop.
Uma baahna wax kudaris ama waxyaabo dheeri ah oo dheeri ah, sidaas darteed xirmada ayaa ka badnaan doonta.
Waxaad heli doontaa laba iyo toban beddelaad iyo noocyada HDR ee aad wax ka beddeli karto oo aad ku beddeli karto hal guji oo keliya.
Waxaad ka heli kartaa boqolaal isku dhafan oo suurtagal ah kooxdan saameynta leh.
Dabcan, waa inaad maskaxda ku haysaa in ficiladani ay kaliya ansax noqon doonaan Adobe Photoshop CS4 ama noocyada dambe.
Ficillada lagu gaarayo saamaynta Qoraalka:
Saameyntan ayaa ah mid si aad ah loo dalbaday, gaar ahaan adduunka xayeysiinta iyo nashqadeynta boodhadh xayeysiis ah ama xaashiyo kala duwan waxayna ka kooban tahay sameynta silhouettes dad xiise leh ama nooc kasta oo kale oo qoraal ahaan ah. Natiijadu waa mid si weyn ufiican waxaana badanaa lagu daraa grunge ama xalal isdaba joog ah oo naga caawiya helitaanka qaabdhismeedyo aan caadi ahayn, casri ah oo cusub. Xirmadan gudaheeda waxaad ku heli doontaa dhowr waxyaalood oo kale oo saameyn ah waana heli doontaa faa'iidooyin badan:
Waxay ku habboon tahay nooc kasta oo sawir-qaadis ah ama halabuur ah (tani waxay u fidsan tahay cabbirka ama daaweynta midabka).
Qaraarku wuxuu noqon doonaa qiime madax-bannaan: Muhiim maaha in aad ku shaqayso muuqaal qaraar hooseeya sababta oo ah tallaabadani waxay awood u yeelan doontaa inay u tixraacdo tixraac si loo abuuro natiijo kama dambays ah oo ku saabsan xallinta sare.
Uma baahnid inaad yeelato aqoon ballaaran oo ku saabsan faafitaanka sawirka.
Waxqabadyada lagu gaarayo saamaynta biyo-biyoodka:
Waa qayb ka mid ah soo jeedimaha hadda jira ee na siinaya xorriyad farshaxan oo dheeri ah. Saameynta biyo-biyoodka ama midab-biyoodka waxay bixisaa waxyaabo aad u soo jiita oo soo jiidasho leh waxayna muujineysaa muuqaalka farshaxanka iyo hal-abuurka ugu badan ee shaqadeena oo ah farsamo-yaqaanno sawir qaade ah. Mararka qaar waxaan ku aragnay saameyntan qaar ka mid ah casharradeena fiidiyowga, si kastaba ha noqotee soo jeedinta in xirmadan ay na siiso ayaa ah mid aad u duufsan sababo dhawr ah
Ma jiro wax xadidan marka loo beddelayo saamaynta biyo-biyoodka. Mid ka mid ah qodobbada ugu adag ee kooxdan ficillada ah ayaa ah xorriyadda ay na siiso iyo waliba dammaanad qaad. Waxaad awoodi doontaa inaad lashaqeyso sawirada xallinta hoose si aad uhesho natiijooyinka cabirka ugu dambeeya ee 2000 x 3000 pixels iyo 300 dpi. Haa, sidaad u maqashid oo leh lakabyo si buuxda wax loo sixi karo.
Ikhtiyaariyadani waxay na siin doonaan goob ku habboon oo aan ku bilaabi karno abuurista tan iyo markii aan ku dabakhno waxaan awoodi doonnaa inaan tafatirno oo aan horumarinno kala duwanaanshaha cusub si ay noo badbaadin doonaan shaqo badan.
Uma baahna aqoon sare oo ku saabsan maaraynta Adobe Photoshop.
Codsigeedu waa mid aad u dhakhso badan oo dhaqso badan.
Waxay na siisaa natiijooyin tayo sare leh oo la daabaco iyadoon loo eegin cabirka ilahayaga ama faylka asalka ah.
Waxqabadyada lagu gaarayo saameyn xardhan:
Kufiican talooyinka soojiidashada badan ama kuwa gacanta lagu sameeyo. The saameyn ku yeeshay Waxay na siin doontaa hawo shucuur leh isla mar ahaantaana adag oo xoog leh oo leh qayb hal abuur leh. Inta ugu fiican oo dhan, waxaan heli doonaa noocyo kala duwan oo saameyn ah iyo si la mid ah sida loo yaqaan 'Watercolor effect', waxaan awoodi doonnaa inaan la shaqeyno dukumiintiyada ilaha nooc kasta ha ahaadeene maadaama ay na siineyso natiijo kama dambeys ah oo leh xallinta sare ee 300 dpi.
Weli wax badan ayaa jira
Marka lagu daro tan kor ku xusan, baakadu waxay leedahay noocyo kala duwan oo saameyn ah iyo beddelaadyo ah si loo daboolo wadarta qaababka 74 ee loo qaybiyey saamaynta sawirrada iyo dhijitaalka ah ee inta badan maanta loo isticmaalo xirfadlayaal maaraynta sawirrada.
Shaki la'aan, waxaa jira sababo badan oo naqshadeeye kasta uga faa'iideysan karo dalabkan, laakiin haddii aad weli rabto wax badan waxaan kuu sheegayaa inaad u adeegsan karto ficilladan qaab gebi ahaanba aan xadidnayn iyo shaqsi ama ganacsi shaqo (in kasta oo iibintu aysan ahayn loo oggol yahay) oo ku samee lacag-bixinta hab aad u fudud oo fudud oo ka socda madal bixinta lacag-bixinta Paypal.
Degso xiriiriyaha: Halkan guji
Waa kuwan tusaalaha saamaynta qaarkood oo dalabkan xiisaha lihi ka mid yahay:
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » In kabadan 70 ficilo qiimo sare ah oo loogu talagalay Adobe Photoshop at 91% off!
10 casharro fiidiyoow ah oo aad u xiiso badan